Impilo yomlutha we-nyaope. Ingxenye yesithathu: Abasebenzi bezenhlalakahle, abathengisa izidakamizwa nokwanda kwesihlava | Scrolla Izindaba
Impilo yomlutha we-nyaope. Ingxenye yesithathu: Abasebenzi bezenhlalakahle, abathengisa izidakamizwa nokwanda kwesihlava
Bekulokhu kuyingxenye yezwe laseNingizimu Afrika, kepha ukungenzi lutho, isithukuthezi, kanye nokungaqiniseki ngekusasa ngesikhathi somvalelo kuholele ekwenyukeni kodlame lwasekhaya nobugebengu.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa nakho kukhuphuke kakhulu njengoba abantu abasha sebekhathe izidakamizwa.
Izikhulu zesikhungo se–South African National Council on Alcoholism and Drug Dependence (i-Sanca) e-Alexandra bathe balwa nenqwaba yabantu abasebenzi izidakamizwa, baphinde babadlulisela nakwezinye izikhungo zokuhlumelelisa izimilo.
Abasebenzi bezenhlalakahle uZiyanda Fambaza noLizzy Dikgale bakhulume ngasese nabakwa-Scrolla.Africa ehhovisi labo.
UZiyanda uthe ngemuva nje kokuba izwe selinciphise izinga lesithathu emuva kwezinga lesihlanu elinzima lomvalelo, babheka nesimo sabantu abasebenzisa izidakamizwa ikakhulukazi intsha nezinsizwa.
“Abantu babecindezelekile. Babengenakwenza lutho futhi babenesithukuthezi. Baxhumene nabantu ababekhuluma nabo ngaphambi komvalelo. Lokhu kuholele ekutheni abantu abaningi basebenzise izidakamizwa,” esho.
ULizzy uthe izikhulu bezisaba ukusebenza nabantu ezingabazi ngenxa ye-Covid-19.
“Izikhungo zokuhlumelelisa izimilo bezingayithathi imilutha njengoba zazenza ngaphambi komvalelo,” esho.
“Lokhu kudale ukubuyela emuva okukhulu esingazi ukuthi sizobhekana kanjani nakho.”
Okhulumela uMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi eGoli, uFeziwe Ndwayana uthe umnyango uyazi ukuthi isihlava sokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa siyanda. Uthe lokhu bakulwa ngezinhlelo zokuvikela ukusetshenziswa kwezidakamizwa.
“Ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kungaphazamisa ukusebenza kobuchopho ezindaweni ezibucayi ezithinta ukugqugquzela, inkumbulo, ukufunda, ukwahlulela nokuziphatha,” kusho uFeziwe.
“Intsha esebenzisa kabi utshwala nezinye izidakamizwa ivame ukuba nezinkinga emindenini nasesikoleni okuholela ekungenzi kahle ezifundweni kanye nezinkinga ezihlobene nempilo. Kungenzeka bavame ukuthinteka ezenzweni zobugebengu ukuze bakwazi ukuba nemali yokuqhuba umkhuba wabo.”
Ngaphandle ezitaladini zase-Alex, indoda edayisa izidakamizwa, (bheka ividiyo) ithe ibinengcindezi kusukela phakathi nonyaka odlule yokuhlinzeka amakhasimende amaningi amasha ngezidakamizwa.
“Ekuqaleni bengiya nemali eyi-R2,000 ekhaya. Kodwa kusukela ngobusika obudlule bengihamba ngiphethe imali eyizi-R2 500 kuya kweyizi-R3 500,” utshele abakwa-Scrolla.Africa, ekhuluma ngaphansi kwemibandela yokungadalulwa.
Uthe usevule nezinye izindawo emalokishini ahlukene futhi bayabelana ngezidakamizwa abazidayisayo.
“Sithola isitoko sethu emadolobheni angaphakathi eGoli nasePitoli,” esho.
Le ndoda eneminyaka engama-36, engabhemi, ithe iyazi ukuthi izidakamizwa ziyingozi futhi ziqeda izimpilo zabantu.
“Kepha mina, ngijabule nje ukuthi ngibe nenhlanhla yokuthola umsebenzi,” esho.
“Bengingasebenzi ngakho-ke kuthe omunye umuntu enginikeza umsebenzi wokumthengisela izidakamizwa, ngalisebenzisa leli thuba.”
INyaope isidakamizwa esilutha kakhulu esiyinhlanganisela ye-heroin nensangu nenhlanganisela yezinye izithako. Imvamisa ithengiswa ngamaphakethe amancane ansundu noma amnyama kusuka emalini engama-R25 iphakethe. Iphinde ixutshwe namanzi bese ijovwa egazini.
Isidakamizwa sinamagama amaningi ahlukene kuya ngendawo esitholakala kuyo. EThekwini, e-KZN kuvame ukubizwa ngokuthi ‘ushukela’. Ibizwa nge ‘whoonga’ e-Western Cape, ‘i-pinch’ eMpumalanga kanye naseGoli libizwa nge ‘nyaope’.